ဖုန်းကိုပမ် blocker - ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစာသား | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဖုန်းကိုပမ် blocker - ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစာသား
ဖုန်းကိုပမ် blocker - ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစာသား APK ကို
မလိုချင်တဲ့ spam များကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်စာသား / sms ကို spam များကိုရယူခြင်း? NUMBERCOP ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်စာသားများပိတ်ဆို့ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, telemarketers နှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်စာသားကို / SMS ကိုပေးပို့သူ phishing, ဖုန်း Scan ကို: NUMBERCOP 50.000 တက်ကြွ spam ဖြန်ဖုန်းနံပါတ်ထက်ပိုခြေရာခံ။ Antivirus ကိုလုံခြုံရေးတူသောအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အလိုအလျှောက်လုပ်ကွက် spam များကိုနံပါတ်များကို။ တစ်လအခမဲ့, နေ့စဉ်အရေအတွက်က updates များကိုပါဝင်သည်။ အလွယ်တကူသံသယဖြစ်ဖွယ် # '' s ကိုရှာဖွေပြီးဖုန်းအသစ် spam များကိုသတင်းပို့ပါ။ , သင့်ရဲ့ privacy ကာကွယ်ပါမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းခိုးမှုမှရှောင်ရှားခြင်းနှင့်မိနစ်ကယ်တင်!
- Automated ပမ်ထောက်လှမ်းခြင်း
အလိုအလျှောက် NUMBERCOP လုပ်ကွက် spam များကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ။ ဒါဟာသင်အသက်ရှင်နေထိုင်ရှိရာဧရိယာများအတွက် spam ဖြန်ဖုန်းနံပါတ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ခြေရာခံရာ NUMBERCOP ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပမ်ညွှန်းကိန်းများက powered ဖြစ်ပါတယ်။
အီးမေးလ်များကိုအဘို့အ spam များကိုစီစစ်ခြင်းဆင်တူ NUMBERCOP ဖုန်းကို spam များကိုစီစစ်ခြင်းအဘို့အ In-အိမ်သူအိမ်သား spam များကိုသုတေသနနှင့်အသုံးပြုသူအစီရင်ခံစာများပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။ NUMBERCOP နှင့်တကွသင်ဖုန်းကို spam များကိုတိုက်ခိုက်နေကျွန်တော်တို့ကို join နဲ့အလွယ်တကူနှင့်အမည်ဝှက်အသစ်က spam များကိုသတင်းပို့လို့ရပါတယ်။
- သင်၏ Block စိတ်ကြိုက်
NUMBERCOP ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် robocalls phishing, ထိုကဲ့သို့သောဖုန်းကို Scan ကို, ငွေတောင်းခံလိမ်လည်မှုအစီအစဉ်များအဖြစ်တောင်းခံခြင်းနှင့်လိမ်လည်မှုနံပါတ်များ, ဖော်ထုတ်မယ်အတွက်အထူးပြုသည်။ သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်ရေးနံပါတ်များကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်ရှေးခယျြထားနံပါတ်များကိုပြန်ဖွင့်ဖွငျ့ဤကာကွယ်မှုကိုစိတ်ကြိုက်နှင့်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
- Lookup သံသယဖြစ်စရာနံပါတ်များ
ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဖုန်းကို Spam တွေကိုဥပဒေကြောင်းအရတရားစွဲဆိုမှုမှကာကွယ်ရန်နေ့စဉ်2ရက်သတ္တပတ်ပျမ်းမျှသူတို့ရဲ့ခေါ်ဆိုသူ၏-id သည်နံပါတ်တစ်ခုပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဖုန်းခေါ်ကောက်တစ်ခုသို့မဟုတ်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျမှ reply မတိုင်မီ NUMBERCOP အတူသင်တို့အသစ်တခုခေါ်ဆိုမှု ID နှင့် ပတ်သက်. သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
- Scan ကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ
သငျသညျအဝင်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျအဘို့ဒါမှမဟုတ်သင်မတော်တဆရွေးချယ်-အတွက်ပရီမီယံဝန်ဆောင်မှုလျှင်ပေးဆောင်လျှင် SMS ကို / စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုစပမ်စျေးကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ NUMBERCOP သင်သိ scam များနဲ့အန္တရာယ်များလင့်များအဘို့သင့်ကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခွင့်ပြုပါတယ်။
NUMBERCOP ဖုန်းပမ် blocker တစ် 30 နေ့တရားခွင်အဖြစ်ထွက်စတင်သည်။ သငျသညျကို Google Play သို့မဟုတ် PayPal ကနေတဆင့်အချိန်မရွေးလုံလုံခြုံခြုံ upgrade နိုင်ပါတယ်။ ထိုအမှု၌သင်တို့ကိုအစဉ်အဆက်သင့်ရဲ့ device ကို upgrade လုပ်ဖို့စီစဉ်ထား: ကျနော်တို့အသစ်ရဲ့ device ကိုသင်စာရင်းပြောင်းနိုင်သည်။
ဧပြီလ 24, 2013 မှာ 9: 44 နံနက်
ငါ့ကိုပိုပြီး Viber ကိုသိ2ကူညီ ,,,